Wiilkii Foosiyo Axmed wuxu ahaa 16 jir markii uu go’aansaday inuu ka tago magaaladiisa Hargeisa ee Somaliland, isla markaana isku dayo inuu gaadho Yurub iyaga oo caawiyay tahriibiyaasha. Foosiyo waxba kama ogayn qorshayaashiisa. Maalin maalmaha ka mid ah guriga ma uusan imaan oo subaxdii dambe daris ayaa u sheegtay inuu wada safray iyada iyo wiilkeeda iyo qaar kale oo wiilal ah.
– “Way ogaatay inuu wiilkeedii baxayo, waa loo sheegay. Laakiin waxba kama ogi wiilkayga taasina waa sida aan ku ogaannay. ”
Foosiyo waa shaqsi karti leh iyo abwaanad caan ah iyo u dhaqdhaqaaqda bulshada wadankeeda. Waxay la xiriirtay waalidiinta toddobada da wiil, waxayna dhammaantood u wada tageen qareenka si ay u soo qabtaan kuwa wax tahriibiya. Mid ka mid ah ayaa la qabtay oo aqoonsiga qofka kale ayaa sidoo kale loo yaqaanay. Laakiin xeerilaaliyaha ayaa go’aansaday inuu arinta ku xaliyo qaab aan rasmi ahayn.
"Waxaan ogaanay xilli dambe in kiiska loo maaraynin sidii ay ahaan lahayd. Xeer ilaaliyuhu uma gudbin maxkamada laakiin wuxuu u xaliyay arinta si aan rasmi ahayn isagoo qoraya heshiis, warqad ah in carruurteena lagu soo celin doono 40 maalmood gudahood. Iyaga (tahriibiyaasha) ayaa waliba saxeexay, iyaga iyo walaalahood."
Laakiin wiilasha lama soo celin. Waxay u yeeraan waalidkood iyago joogo Yemen waxayna yiraahdeen waxaa loo qaadayaa Suudaan iyaga oo aan raali ka ahayn. Laba bilood ka dib waalidiinta ayaa la soo xiriiray ka ganacsadayaasha kuwaasoo dalbaday lacag aad u badan si loo siidaayo wiilasha. Foosiyo way naxdeh. Dadaal weyn ayay qaadatay aruurinta madaxfurashada.
"Waxaan lacagta ugu diri jirnay shirkadaha xawaaladaha. Waa inaad sameysaa sababtoo ah cunuggaaga waa la hayaa. Cunugaaga waxaa cunay dhurwaaga, waa inaad sameysaa wax kasta oo suurta gal ah. ”
Markii wiilkeedii aan la siidayn oo afduubayaashiisu sii wadeen inay kadeedaan taleefanka ayay Foosiyo go’aansatay inay iska indhatirato. Waxay ogaatay in taasi tahay wadada kaliya ee lagu burburiyo taatikada ganacsigooda. Iyada oo wadne garaacaysa, ayay telefoonkeedii xidhiidhay oo waxay diiday in ay wicitaano kale sii wadato.
"Waxaan xaqiiqsaday inaan ahay shaqsi ay maskaxdoodu rabaan inay waxyeelleeyaan. Si toos ah ayay ula xiriireen hooyooyinkii laakiin ma aysan soo marin aabayaasha, si ay uga careysiiyaan oo uga naxaan. Waan fahmay ugana tagay mustaqbalkeyga insha allah. Haddii Axmed dhiman lahaa, ma joojin kari. ”
Foosiyo wali ma oga waxa ku dhacay wiilkeeda, laakiin waxay ka go'an tahay inay jebiso maafiyada dadka tahriibisa. Waxay talo adag u siisay waalidkeed walaalaheeda: Jooji u diritaanka lacagaha madax furashada ah ee tahriibinta! Waxay sidoo kale waddaa olole kor loogu qaadayo wacyiga iyo ka saarida dadka dhaqankooda. Iyada oo leh cod la maqlayah, waxay dalbataa wax qabad.
"Maxaysan sharciyo arrintan uga soo bixin? Maxaysan u arki weyday ficil, muxuu aamusnaan u jiraa? Culumada, maxaad haysaan? Jaamacado ka qalin-jabiyay, maxaad haysaa? Oday-yahow iyo waxgaradka, maxaad haysaan? Wax ka wanaagsan samee! Aynu u istaagno dadka! Dhallinyarada ka dhawrah! "